Akụkọ - 6-17 na-agbanwe nzọpụta ihe mberede ala ọma jijiji
Dị ka China Earthquake Network si kwuo, oke ala ọmajiji 6.0 mere na 22:55 oge Beijing na June 17, 2019 na Changning County, Yibin City, Sichuan Province (28.34 degrees north latitude, 104.9 degrees east longitude), na omimi nke 16 kilomita. .
Ala ọmajiji ruru 6.0 mere na 22:55 na June 17, 2019 na Changning County, Yibin City, Sichuan, nwere omimi nke 16 km.Ala ọmajiji ahụ mere n'ọtụtụ ebe na Sichuan, Chongqing, Yunnan na Guizhou.Aghọtara na oke ala ọmajiji 6 nwetara ịdọ aka na ntị nke ọma na Chengdu, Deyang na Ziyang na Sichuan.Ruo n'elekere 8:00 nke mgbede na Jun 26, 2019, 182 mkpọnwụ azụ nke oke M2.0 na karịa ka edekọtara.
N'ihe dị ka elekere 06:00 na June 19, 2019, oke ala ọmajiji nke 6.0 na Changning, Sichuan, emetụtala mmadụ 168,000, na-egbu mmadụ 13, mmerụ ahụ 199, na mbugharị mberede 15,897 n'ihi ọdachi ahụ  .N'ihe dị ka elekere 16:00 na June 21, ala ọma jijiji ahụ akpatawo ọnwụ 13 na mmerụ ahụ 226, na ngụkọta nke ndị 177 nwụrụ.
Ala ọmajiji 5.4 dị na Gongxian County nke mere na 22:29 na June 22, 2019 bụ oke ala ọmajiji nke 6.0 magnitude na Changning na June 17. Dị ka elekere 5:30 nke mgbede na June 23, 5.4 magnitude ala ọma jijiji na Gongxian County kpatara. ngụkọta nke ndị mmadụ 31 na Gongxian County na Changning County ga-ata ahụhụ obere mmerụ ahụ na obere mmerụ ahụ, gụnyere mmadụ 21 bụ ndị ụlọ ọgwụ maka nlele na ọgwụgwọ.
Ná mmalite nke ọdachi ahụ, isi ụlọ ọrụ Shenzhen nwetara akụkọ ngwa ngwa site na ebe ọrụ ahụ dị na mpaghara Sichuan, na nzaghachi na ọrụ nnapụta nke ndị ọchịchị obodo na Changning County, ụlọ ọrụ ahụ zigara 15 KLT-6180E ozugbo na ebe etiti. isonye na nnapụta.